एजेन्सी । चिनियाँ अनुसन्धानकर्ताहरूले सूर्यको बाहिरी भागको फुटेको क्षेत्रमा रहेको चुम्बकीय अवस्थाका बारेमा अनुपम जानकारी दिन मिलिमिटर तरङ्गगयुक्त सौर्य रेडियो स्पेक्ट्रम अवलोकन प्रणालीको विकास गरेका बुधबार चाइना साइन्स डेलीले उल्लेख गरेको छ ।
मेरो डक्टर एप १ लाखभन्दा बढी डाउनलोड
काठमाडौँ। मिदास टेक्नोलोजीको हेल्थकेयर एप “मेरो डक्टर” ले स्थापना भएको ८ महिनाको छोटो अवधिमा १ लाखभन्दा बढी डाउनलोड तथा ३५ हजारभन्दा बढी बिरामीहरुलाई सेवा पुर्याएको छ। सँगसँगै, मेरो डाक्टरमा सूचीबद्ध अस्पतालहरुबाट ३ महिनाको अन्तरालमा १० हजारभन्दा बढी अस्पतालको ओ.पी.डी.टिकट बिरामीहरूले आफैँ अस्पतालमा नगई घरबाटै भुक्तानी गरी आस्पतालका सेवा लिन सफल भएका छन्।
जोरपाटीमा डिशहोम फाइबरनेटको सह–वितरण सोरुम
काठमाडौँ । नेपालभर इन्टरनेट र नेट सेवा विस्तार गरिरहेको डिशहोम फाइबरनेटले काठमाडौँको जोरपाटीमा पनि सह–वितरण सोरुमको सुभारम्भ गरेको छ। माघ १९ देखि डिशहोम फाइबरनेट बिक्री तथा बिक्रीपछिको सेवा प्रदान गर्न सुरु गरिएको सो सोरुमको सञ्चालन दीपा इम्पेक्सले गर्नेछ।
एजेन्सी । दक्षिण कोरियामा अनलाइन सपिङ गर्ने नागरिकको संख्या निकै बढेको छ । यहाँका अधिकारीहरुले दक्षिण कोरियामा अनलाइन सपिङ गर्नेको संख्या अहिलेसम्मकै बढी भएको पाइएको बताएका छन् ।
सिजी नेट १५ दिनसम्म निःशुल्क प्रयोग गर्न पाइने
काठमाडौँ। चौधरी ग्रुप अन्तर्गतको सीजी कम्युनिकेसन्स लिमिटेडले सिजीनेटको सेवामा ग्राहकलाई १५ दिनसम्म निशुल्क इन्टरनेट दिने भएको छ। ‘पहिले ट्राइ गरौं अनि सब्सक्राइब गरौं’ भन्ने योजना अनुसार सिजीले १५ दिनसम्म निशुल्क सेवा दिने भएको हो।
मार्क जुकरबर्गको सम्पत्ति ३१ अर्व डलरले घट्यो, शिर्ष १० धनी व्यक्तिको सुचीबाट पनि बाहिरिए
एजेन्सी । मेटाका सीईओ मार्क जुकरबर्गलाई नमिठो झट्का लागेको छ । फेसबुक प्रयोगकर्तामा कमी आएपछि उनको सम्पत्तिमा गिरावट आएको छ ।
चीन के बनाइरहेको छ जुनमार्फत ६० मिनेटमा अमेरिका पुगिन्छ ?
एजेन्सी । चीनको एक कम्पनीले हाइपर सोनिक प्लेनको योजना पेश गरेको छ । यो प्लेनमार्फत बेइजिंगदेखि न्युर्योकसम्मको यात्रा एक घण्टामा हुने बताइएको छ ।
एक युवाले आफ्नी आमा र तीन भाइबहिनीको गोली हानी हत्या गरेपछि खतरनाक भिडियो गेममा प्रतिबन्ध लगाउन सिफारिस !
एजेन्सी । पाकिस्तानको प्रहरीले पञ्जाब प्रान्तको लाहोर जिल्लामा एक युवाले आफ्नी आमा र तीन भाइबहिनीको गोली हानी हत्या गरेपछि पवजीलगायत खतरनाक भिडियो गेममा प्रतिबन्ध लगाउनका लागि प्रान्तीय र संघीय सरकारलाई सिफारिस पठाउने निर्णय गरेको छ ।
पर्सा । बाघ गणनाका लागि पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्जमा जडान गरिएका मध्ये नौ क्यामरा हराएका छन् । कर्मचारीका अनुसार निकुञ्जमा जडान गरिएका २३ क्यामरामध्ये नौ क्यामरा हराएका हुन् ।